Teny tsara indrindra avy amin'i William Congreve - Victor Mochere
William Congreve dia mpanoratra tantara tsangana sy poeta anglisy nandritra ny vanim-potoana Famerenana amin'ny laoniny. Fantatra amin'ny fifanakalozan-kevitra am-pahendrena sy manesoeso azy amin'ny hatsikana ny fomba fanao tamin'izany vanim-potoana izany. Congreve no namolavola ny hatsikana anglisy amin'ny fomba amin'ny alàlan'ny fampiasàny ny resaka fanesoesoana sy an-tsoratra tsara. Nahatratra laza i Congreve tamin'ny 1693 rehefa nanoratra ny sasany tamin'ireo lalao anglisy malaza indrindra tamin'ny vanim-potoana Famerenana amin'ny laoniny izy. Io vanim-potoana io dia nampiavaka ny zava-misy fa ny andraikitry ny vehivavy dia nanomboka nilalao vehivavy betsaka indrindra, ary hita miharihary amin'ny asan'i Congreve.
Ny sasany amin'ireo teny nindramina tsara indrindra avy tamin'i William Congreve dia voatanisa etsy ambany.
"Amboadia noana mihitsy no hihazakazaka, amin'ny fanantenana, amin'ny alàlan'ny maro, mba hahazoana antoka fa iray." - William Congreve
“Ny fanesoana kely dia manintona.” - William Congreve
"Ny wit dia tsy tokony ho tso-po kokoa noho ny vehivavy tsy tapaka; ny iray kosa miady hevitra momba ny fahasimban'ny ampahany, ny amin'ny hatsaran-tarehy hafa. ” - William Congreve
"Ny vehivavy dia manery ny lehilahy hangina fotsiny, mba hahafahany miteny amin'ny tenany." - William Congreve
“Ary ny famoizam-po mainty dia mahomby amin'ny fandalinana volontany.” - William Congreve
“Fanomezana ho an'ny olon-tiana ny hatsaran-tarehy.” - William Congreve
“Miandry asa soa foana ny fitahiana, na dia tara aza, dia misy valiny azo antoka.” - William Congreve
“Nefa lazao izay tianao, 'Aleo avela toy izay tsy ho tiana mihitsy. Ny fandefasana ny tanorantsika amin'ny tsy firaharahiam-poana, mandà ny zava-mamy amin'ny fiainana satria tsy maintsy mandao antsika izy ireo indray mandeha, dia mamporisika toy ny maniry ny ho teraka antitra satria tsy maintsy ho antitra isika indray andro any. ” - William Congreve
“Avia, avia, avelao ho an'ny kamo ny raharaha, ary ho an'ny adala ny fahendrena: ilain'izy ireo izany: ho mpampianatra ahy ary ankafiziko ny asako, ary avelao i Time Time hanozongozona ny verany.” - William Congreve
“Ny fifamofoana dia ny fanambadiana, ary prologue tena mampihomehy amin'ny lalao milay be.” - William Congreve
«Aza manemotra mandra-pahendrena ianao rahampitso, mba tsy hiposahan'ny masoandro anao rahampitso; Na raha rahampitso rahampitso hampifalifaly ny masonao amin'ny famelomana sy ny tsy fijeriny hazavana, dia ho feno fankasitrahana toy inona ireo tara-pahazavany! Toy ny manohana indroa tsy ampoizina, azafady. ” - William Congreve
«Aza mangataka andro mandra-pahendrena; tsy hiposaka anao ny masoandro rahampitso. " - William Congreve
"Ny lehilahy rehetra dia manao adala indray mandeha eo amin'ny fiainany, fa ny manambady dia milalao adala mandritra ny androm-piainany." - William Congreve
“Ny tahotra dia avy amin'ny fisalasalana. Rehefa tena mahazo antoka isika, na amin'ny fahamendrehantsika na amin'ny tsy fahaizantsika, saika tsy mahatanty atahorana isika. ” - William Congreve
"Tena mpiara-belona tamin'i Hannibal tamin'izany andro izany." - William Congreve
"Izay miantso voalohany hoe ajanony ny mpangalatra, dia matetika izy no nangalatra ny harena." - William Congreve
"Izay manampin-tsofina amin'ny fahitan'ny hafa dia tsy mampiseho fatokisana firy ny amin'ny tsy fivadihan'ny fomba fijeriny manokana." - William Congreve
"Ny voninahitra dia fahavalom-bahoaka, ary ny fieritreretana dia ao an-trano, ary izay te hiantoka ny fahafinaretany, dia tokony hanome voninahitra olona iray ary hiaraka amin'olon-kafa." - William Congreve
“Tena sarotra ny zavatra iray 'hampifaly anareo rehetra.” - William Congreve
“Matetika aho no menatra na mariky ny fahatsapana ho meloka na tsy niteraka.” - William Congreve
“Adala aho, fantatro izany; ary na izany aza, Ampio aho avy any an-danitra, ampy fahantrana aho ka tsy ho mpanao ratsy. ” - William Congreve
"Miombon-kevitra foana amin'ny olona mianatra aho raha miteny izy ireo aloha." - William Congreve
“Niakatra tamin'izao tontolo izao aho, satria teraka tao anaty lakaly.” - William Congreve
“Mibaboka tamim-pahatsorana aminao aho, tsy afaka mijery rajako mihitsy aho, raha tsy misy fisaintsainana tena mandratra.” - William Congreve
“Hitako fa mihamatotra izahay ary atahorana ho malaindaina.” - William Congreve
“Fantatro ny vehivavy tia miresaka tsy an-kijanona, tsy hanome lalao ara-drariny izy; manana ny lela mihodina maharitra izy ka tsy maintsy miandry ny aiko mandra-pahafatiny, alohan'ny hahatratrarany ny teniny farany! ” - William Congreve Quotes
“Fantatro fa tsiambaratelo izany, satria nibitsibitsika teny rehetra teny izany.” - William Congreve
“Raha ny fahasambarana amin'ny fahafaham-po no apetraka, dia mahonena ny hendry, ary ny adala kosa mahazo fitahiana ihany.” - William Congreve
"Raha misy fitiavana ao am-pitiavana, 'rehefa hitako io fona io, izay nalatsahan'ny hafa rà, dia nalatsaka ho ahy izy." - William Congreve
"Raha tsy fitiavana izany, dia hadalana, ary azo avela izany." - William Congreve
"Sainan'ny famoronana, feno fotaka ny atidohany." - William Congreve
"Asan'ny poeta mampihomehy ny mandoko ny ratsy sy ny hadalan'olombelona." - William Congreve
“Andao isika ho hafahafa sy hamboly tsara: Aoka ho hafahafa isika toy ny hoe efa nanambady ela be; Ary namboly tsara toy ny hoe tsy nanambady mihitsy izahay. ” - William Congreve
“Ny fitiavana fa ny malemy saina, rehefa 'tsy miaraka amin'ny faniriana miharo; Afo marary, izay raha tsy fahanana dia lany andro; Ary ny fihinanan-tsakafo dia mandany ny afo mandoro tena. ” - William Congreve
"Ny mozika irery miaraka amin'ny ody tampoka dia afaka mamehy ny fahatsapana mirenireny, ary mampitony ny saina mikorontana." - William Congreve
“Ny mozika dia manana ozika hampitony ny tratra masiaka, hanalefaka ny vatolampy na hiondrika hazo terebinta voahidy.” - William Congreve
“Ny mozika dia manana ody mba hampitony ny tratra masiaka, hanalefaka ny vatolampy, na hiondrika hazo terebinta voahidy. Novakiako fa nifindra ny zavatra tsy manana aina, ary, toy ny amin'ny fanahy velona, ​​dia nampahafantarina azy tamin'ny isa majika sy ny feo mandresy lahatra. ” - William Congreve
"Tsy misy sarontava toa ny fahamarinana misokatra hanafina lainga, fa ny mitanjaka no miafina farany." - William Congreve
“Tsia, tsy fahavalon'ny fianarana aho; Tsy maharary ahy izany. ” - William Congreve
“Ary tsy fahatezerana mirehitra, toy ny vehivavy ihomehezana.” - William Congreve
"Tsy misy afa-tsy ianao no mahazo mitazona ny saiko, ary tsy afaka mitazona afa-tsy ianao." - William Congreve
“O, litera - nanana taratasy aho - enjehina amin'ny taratasy aho - halako ny litera - tsy misy mahay manoratra taratasy; ary na izany aza dia misy izy ireo, tsy misy mahafantatra ny antony - manompo iray izy ireo hanongotra volo. ” - William Congreve
“Ry zandry a, miss, tsy tokony hanoroka ianao ka hilaza.” - William Congreve
“O, izy no fanefitry ny faniriana.” - William Congreve
“Ny minitra iray dia manome famoronana hamongorana; Izay haverina dia hampiasaina amin'ny taona iray manontolo. ” - William Congreve
“Lazao izay tianao, fa tsara kokoa ny tavela toy izay tsy ho tiana mihitsy.” - William Congreve
“Tiany ny tenany, fa ny hafa mankahala, noho izay valiny ho azy; Ary raha mihomehy azy ireo izy dia manadino fa izy no zavatra tsinontsinona. ” - William Congreve Quotes
“Indraindray ny saina dia mety ho tsy mahay mandanjalanja ary koa fahamarinana.” - William Congreve
"Ao amin'ny tena hatsaran-tarehy, toy ny amin'ny fahasahiana, izay fanahy tery tsy afaka sahy mankafy." - William Congreve
“Tsy misy zavatra tsy mendrika noho ny lehilahy mahay kalitao mihoatra ny mihomehy…. - William Congreve
"Nisoratra anarana ireo lahatsoratra ireo, raha manohy miaritra kely kokoa anao aho, dia mety hihena ho vady." - William Congreve
“Na dia mampanjary nofo iray aza ny mpivady, dia lasa adala roa ihany izy ireo.” - William Congreve
“Toy izany no mbola iharan'ny famosaviana amin'ny alahelo; Manam-bady maika, dia mety hibebaka amin'ny fialam-boly isika. ” - William Congreve
“Noho izany ao anatin'ity toe-javatra mampalahelo ity, saingy o, mahafinaritra loatra! tsy afaka mifikitra afa-tsy aminao ny fanahiko; izany no eritreretiny, ankafiziny, ankafiziny, tsy iankinan'ny fiankinana, atokisanao irery. " - William Congreve
“Ny fitadiavana zatovo izay tsy fahitana eo imasony, na adala eo amin'izao tontolo izao, dia asa sarotra tokoa.” - William Congreve
“Avadiho ny pimp, ny mpandokadoka, ny quack, ny mpisolovava, ny parson, ho mpitondra fivavahana amin'ny tsy mino an'Andriamanitra, na ny soavaly ho an'ny vehivavy antitra, na inona na inona afa-tsy poeta; Fa poeta no ratsy kokoa, mahery setra kokoa, timorous ary fawning noho ny efa nolazaiko. " - William Congreve
“Ny tsy fahatokisana sy ny fiandrasana no mahafaly amin'ny fiainana. Tsy azo antoka ny filaminana. ” - William Congreve
"Izay mahafaly olona mifanohitra amin'ny sitrapony." - William Congreve
"Izay mpanjaka, izy koa dia rain'ny tanindrazany." - William Congreve
"Ny maingoka dia tsy maintsy holofain'ny wit: manapaka diamondra amin'ny diamondra." - William Congreve
“Ny vehivavy dia toy ny tetika amin'ny alàlan'ny tanana, izay, raha te-hidera, dia tsy tokony ho azontsika” - William Congreve
“Ny vehivavy toy ny lelafo dia manana hery manimba; Tsy hovonoina mandra-pahalany ritrany. ” - William Congreve
“Ny teny no fanohanana malemy noho ny tsy firaharahana mangatsiaka; ny fitiavana tsy misy fiteny re. ” - William Congreve
“Vehivavy ianao: tsy tokony hiteny izay eritreretinao mihitsy; ny teninao dia tsy maintsy mifanohitra amin'ny eritreritrao, fa ny fihetsikao mety mifanohitra amin'ny teninao. ” - William Congreve
Ferdinand Waitititu Worth Net 2022